Akụkọ - Na October 15,2019, WandeKai sonyere na 126th Canton Fair.
Na October 15,2019, WandeKai sonyere na 126th Canton Fair.
Oge: 15th na 19th Oct, 2019
Nọmba Booth: 11.2D35-36E12-13
Foreignlọ Ahịa Azụmaahịa China bụ ụlọ ọrụ ọha na eze n'okpuru Ngalaba Azụmaahịa. Ebe ọ bụ na e guzobere China Import and Export Fair (nke a makwaara dị ka Canton Fair) na 1957, ọ bụ ọrụ maka ịhazi Canton Fair. N'oge ndị na-abụghị Canton Fair, onye nnabata ma nọrọ na nnabata dị iche iche, ngosipụta na okwu, dị ka China (Guangzhou) Expo Expo, China (Guangzhou) International Automobile Exhibition, Malaysia China Import and Export Commodities Exhibition and investment tattaunawa, wdg China Foreign Trade Center nwekwara nwere na-arụ ọrụ kasị oge a ngosi ụlọ nzukọ na Asia na-ebute ụzọ nke ụwa, na Canton Fair Ngosi Hall dị na Pazhou Island, Haizhu District, Guangzhou. Na ihe karịrị afọ 50 nke ahụmịhe n'ịhazi ihe ngosi, pụtara ìhè rụzuru na ọkachamara ọrụ, China Foreign Trade Center enyene a dị oké mkpa na China ngosi ụlọ ọrụ.
Ihe ngosi Canton bu ihe omuma ahia zuru ụwa ọnụ nke nwere akụkọ ntolite kachasị ogologo, nke kachasị, nke kachasị egosipụta, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa bịara, kesara mba ndị na-azụ ahịa na nnukwu azụmaahịa na China.
Ọ bụ usoro dị egwu maka ụlọ ọrụ ndị China iji chọpụta ahịa mba ụwa na isi ihe atụ iji mejuputa atụmatụ China maka uto azụmaahịa mba ofesi. The Canton Fair na-eje ozi dị ka ikpo okwu mbụ na nke kachasị mkpa iji kwalite azụmaahịa mba ofesi China, na barometa nke mpaghara azụmahịa mba ofesi. Ọ bụ windo, akara ngosi na akara nke mmeghe China.
A na-ekewa ngwaahịa ndị atọ n'ụzọ atọ: ọla kọpa, ọla kọpa, HVAC ngwaahịa. Ọnọdụ ngwaahịa na ọkwa dị elu, ọkwa, na-egosipụta uru gburugburu ebe obibi, bụ North America, Europe na ahịa ndị ọzọ mepere emepe nke ndị na-azụ ahịa.Ọkachasị na North America, Mpempe Mpempe Mpaghara Nkeji;Multi Turn Tụkwasịnụ Valves; F1960 & F1807 Brass Fittings; Brass bọl valvụ na-ewu ewu.